आवाज, मानिस, कुराकानी र भावना को अभिव्यक्ति को छैन केवल ध्वनि दिइरहनुभएको, तर गाइरहेका गर्दा सक्षम endowed छ जो प्रकृति। मानव आवाज को माधुर्य उनको multicolored र पिच को दायरा धेरै व्यक्तिगत हो को धेरै धनी प्यालेट छ। यी मापदण्ड एक व्यक्ति गायन कला मा एक अलग विधा निर्धारण गर्न अनुमति दिन्छ।
धेरै अवधारणा परिभाषित थियो र अर्को ल्याटिन लागि डिजाइन (vocalis - «लग»)। Vocalist - एक साधन रूपमा आफ्नो आवाज प्रयोग गर्ने संगीतकार। यसलाई कम र ठूलो नोटहरू गाइरहेका लग हुन सक्छ। बास वा soprano, baritone वा mezzo-soprano, अल्टो र पक्षलाई - गाइरहेका आवाज दुई विभिन्न प्रकारका छन्।
गायक को श्रेणी मा केवल गायक क्लासिक खेल गर्दछ, तर पनि प्रदर्शन गर्ने र बोलेका शब्द recitatives। शास्त्रीय संगीत सधैं, एक स्वतन्त्र सांगीतिक साधन रूपमा, गायक आवाज बताइरहेका यसको सुविधा र सक्षमता विचार, आफ्नो काम लेख्नुहोस्।
गायन आवाज को प्रकार निर्धारण
गीत गाउने आवाज व्यक्तिगत सुविधाहरू vocalist निर्धारण गरिन्छ उचाइ जो दायरा, को प्रकार मा विभाजित छन्। एक धेरै महत्त्वपूर्ण कार्य - एक निश्चित प्रकार मतहरू को जिम्मेवारी। बास, अल्टो, soprano, पक्षलाई - दायरा कि प्रकारको मात्र एक विशेषज्ञ निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक, vocalist गायन दायरा समय परिवर्तन हुन सक्छ, र क्षमता परे आवाज को प्रयोग पनि संगीतकार को स्वास्थ्य असर गर्न सक्छ।
आवाज को प्रकार निर्धारण मा गायक खाता धेरै कारक मा लिन्छ:
आवाज (गायन शिक्षकहरू यो "रंग को आवाज" कल)।
TESSITURA (क्षमताहरु र माथिल्लो ध्वनि लिएर को धीरज सीमित)।
को कण्ठ संरचना (को परामर्श, डाक्टर phoniatrics)।
गायक को, बाह्य व्यवहार र मनोवैज्ञानिक विशेषताहरु।
पुरुष आवाज को उच्चतम
Oddly पर्याप्त, हाम्रो समय मा केटाहरू सपना विषयको, एक गायन क्यारियर बनाउन, योजना एक पक्षलाई छ। सम्भवतः यो बित्दै जाँदा सनक छ। आज, यो अक्सर पुरुषहरु उच्च आवाज लागि कुल लेख्न जो समकालीन रचयिता, द्वारा dictated छ। यसलाई सधैं थियो। तर हामी पक्षलाई बुझ्न आवश्यक - आवाज छ?
"पहिले" दोस्रो अक्टेभ Language को - पक्षलाई गायन आवाज को क्लासिक मानक प्रकार बाहिर संकेत पहिलो अक्टेभ Language "पहिले" पुरुष दायरा को उच्चतम रूपमा परिभाषित गरिएको छ। तर यी सीमाहरु unshakable छन् कि छैन तर्क गर्न सकिन्छ। यस पक्षलाई पनि भूमिकाको दायरा भित्र कडाई लिखित गर्दा मात्र एक शास्त्रीय गायन, तर पनि पप र रक गायक जसको संगीत अक्सर सीमा परिभाषित सीमा पार लागि एउटा संगीत रजिस्टर छ - यहाँ म पक्षलाई भन्न पर्छ।
के पक्षलाई हुन्छ
केवल छुट्याइयो दायरा भित्र tenors निष्कर्षमा पुग्न अन्याय हुनेछ। बल, स्पष्टता र केही tenors थप gradation लागि तिनीहरूलाई अनुमति संगीत, साथै अन्य प्रकार, चारै ओर। मात्र अनुभवी गायन कोच अर्को सुलभ देखि भेद एक उपप्रकार को Subtleties। यस पक्षलाई पनि के हो?
पक्षलाई-altino वा countertenor
आवाज, जस्तै केटा गरेको, जो उत्परिवर्तन पछि बिग्रियो र कम टोन संग संरक्षित सबै tenors, को उच्चतम। यो पक्षलाई पनि एक महिलाको आवाज अत्यन्तै दुर्लभ छ थप जस्तै, यो प्रकृति को गल्ती सकिन्छ छ। एक countertenor स्वर एउटा उदाहरण Kuznetsova गरेर "रात Aria को रानी" हुन सक्छ।
आवाज पनि महिला गायन नजिक छ, तर जोडना Timbre भइरहेको। यो हावा र सजिलै सुनिन्छ।
एक, कोमल नरम र सूक्ष्म रंग संग सबै tenors सबैभन्दा सार्ने आवाज। को Lyric पक्षलाई आवाज एक हडताली उदाहरण एस Lemeshev थियो।
उपप्रकार पक्षलाई धेरै denser र धनी को गेय, तर रंग overtones, बन्द गर्नुहोस्।
उहाँले सबै भन्दा कम छ tenors को वर्गीकरण, ध्वनि को wherein शक्ति र baritone गर्न Timbre टोन को निकटता देखि। नाटकीय पक्षलाई लिखित धेरै operatic भूमिकाको लागि (Othello, "Spades को रानी" को हरमन)।
उपप्रकारों tenors को विशेषताहरु देखि, ती सबै बुझे गर्न सकिन्छ प्रति-पक्षलाई बाहेक आफ्नो रंग, Timbre द्वारा प्रत्येक अन्य फरक। पक्षलाई - मनपर्ने नायक-प्रेमी संग नायक liberators, नायक-लडाकूको सुरु र खत्म, वीर वर्ण को पार्टी को लागि आवाज लग।
अर्को साइन, वर्गीकृत tenors तथाकथित संक्रमणकालीन क्षेत्रमा हुनेछ। यी टिप्पणीहरू मा आवाज अनुकूल र खेल को बाटो परिवर्तन गर्न थाल्छ। पारित नोट गायन तंत्र को संरचना सिधै निर्भर छन्। यो उच्च-पिच ध्वनि, बंधन को स्थिति परिवर्तन नगरी गायक निकाल्छ जो सीमित। प्रत्येक यो खण्ड आफ्नै, व्यक्तिगत vocalist। उहाँले गायन तार को प्रशिक्षण मा निर्भर गर्दछ। पक्षलाई - यो गाइरहेका आवाज प्रकार को सबै भन्दा चुस्त छ। तसर्थ, पक्षलाई लागि संक्रमण भाग आफ्नो क्यारियर परिवर्तन हुनेछ।
Timbre - सुविधा Tenors
आफ्नो आवाज प्रकार निर्धारण मा मुख्य गल्ती साईट युवा गायिकाहरुमध्ये मात्र दायरामा यसलाई वर्गीकरण गर्ने प्रयास हो। एक विशेषज्ञ को परिभाषा संलग्न छ, यो पक्कै पनि आवाज को टोन मूल्याङ्कन गर्नेछ। व्यवसायी टोन "ध्वनि रंग" कल। यो आवाज नोट सही उचाइ र शक्ति को पूर्ण खेल्न टोन गर्न मद्दत गर्छ। यो अक्सर एक सुन्न सही लागि पर्याप्त छैन भन्ने हुन्छ "निदान।" धेरै अस्थिर एक विशेषता - टोनलाई पछि। तर यो शास्त्रीय गायन बारेमा बढि छ।
पक्षलाई र समकालीन संगीत
र operatic भूमिकाको छोएर बिना समकालीन संगीत को प्रदर्शन को लागि, यो आवश्यक छैन के तपाईंको पक्षलाई निर्दिष्ट छ। आवाज बस एक उच्च, मध्यम वा कम रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ। पश्चिम लामो यस्तो ग्रेडिंग अभ्यास गरिएको छ। यो पक्षलाई - पुरुष आवाज को उच्चतम परिभाषा हो।
यो अधिवेशन जवान मानिसहरू तीता आवाज वा कम-मध्य रजिस्टर, को पक्षलाई जस्तै छैन को प्रकृति भएको वृद्धि दिन्छ। आवाज - एक सांगीतिक साधन छ, र कुनै पनि उपकरण त्यहाँ अर्केस्ट्रा मा एक पक्ष हो। पनि आधुनिक संगीत बीच, दुर्भाग्य आज केन्द्रित मुख्य रूप tenors मा, एक baritone र बास लागि लिखित अद्वितीय मेलोडीज सुन्न सक्नुहुन्छ।
Alisa सोम - जीवनी र काम
Intest-bacteriophage: दबाइ को विवरण
कसरी चरणमा एक पेन्सिल नारी आकर्षित गर्न?
जापानी किन विश्वास आक्षेप कि - माछा, सबै माछा को progenitor?
मुरब्बा आलुबखडा: एक सरल नुस्खा मा घर मिठाई
घर subwoofer चेक
Mincer Zemler, Vitek र अन्य ब्रान्डहरु लागि सुझाव के हुन्